GREG နှင့် AMBER ကွဲသွားသည်။ LOVE ISLAND'S ANNA နှင့်ညီမ MANDI တို့ပါ ၀ င်သည် - သတင်း
ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောသတင်းတွင် Love Island 2019 ၏ဆုရရှိသူ Greg နှင့် Amber တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကွဲသွားသည်။ သို့သော်ထင်ရသည့် အချိန်မှစ၍ ဂရက်၊ အမ်ဘာနှင့်အန်နာတို့မှာလူ ၃ ဦး ပါဝင်သည်။
တကယ်တမ်းတွင်၊ လေးယောက်ကိုလုပ်ပါ - အန်နာ၏အစ်မသည်အမ်ဘာ၏ထောင့်ကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုနေသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် Instagram ပုံပြင်ဗီဒီယိုများ, တီဗီအင်တာဗျူးများနှင့်အရိပ်ပစ်ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့အများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤတွင် Greg, Amber နှင့် Anna (နှင့် Anna ၏အစ်မ Mandi) တို့အကြားဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအားလုံးကိုဖော်ပြသည်။ ရပါတယ်။
Greg နှင့် Amber ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကွဲ
Love Island 2019 final အပြီးငါးပတ်အကြာတွင် Greg နှင့် Amber ပြိုကွဲခဲ့ကြောင်းနောက်ဆုံးသောကြာနေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
Greg ကိုသူမ၏စာသားအားဖြင့်စွန့်ပစ်ပြီးနောက် Amber '' အကြီးအကျယ် '' ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည် အရင်းအမြစ်တစ်ခုက The Sun ကိုပြောကြားခဲ့သည်။ Greg သည် Amber နှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားရှိပြီးအလုပ်များနေသည့်အချိန်ကိုအပြစ်တင်နေသည်။ ယခုသူတို့အလုပ်အကိုင်ကိုအာရုံစိုက်ချင်သည်။
Amber ကို Greg အသုံးပြုသည်ဟုခံစားရသည်။ သူဟာသူတို့ရဲ့အကွာအဝေးနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းသတိထားမိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူဟာအကွာအဝေးအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုတာကိုသိပြီး villa မှာ Amber ကိုရှာဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
သူဟာလန်ဒန်ကိုသွားဖို့ Amber ကိုငါးပတ်လောက်ကြာမကြည့်ရသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူဟာအမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတာပါ။
လူအများကချက်ချင်းပင် Amber နှင့် Greg သည်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိ Late Late Show တွင်သူတို့ကွဲသွားသည့်နေ့၌ပေါ်ထွက်လာဖို့ရည်ရွယ်ထားသည်။
Greg ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပွဲအပေါ်သွား၏, ဒါပေမယ့် Amber မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါကဖြစ်သကဲ့သို့လုံလောက်သောအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့ဟာပြပွဲအပေါ်အကြောင်းကိုပြောပြီခဲ့သည် ဂရက်က 'ငါနဲ့အမ်ဘာတို့ကနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်မှာစကားပြောနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကအခြေအနေနဲ့သူမယူကေမှာရှိနေတဲ့အချက်ကိုလက်တွေ့ကျဖို့လိုတယ်။
“ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်များနေကြပြီးဒီအခွင့်အရေးတွေကိုယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်။ သူမမှာသူမနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တိုင်းရှိတယ်၊ ငါအိုင်ယာလန် ၇s နဲ့အိုလံပစ်အတွက်အသင်းကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။
သူဟာအနာဂတ်အတွက် Amber ကိုပြန်ပြောချင်တယ်လို့လည်းအရိပ်အမြွက်ပြောကြားပြီးသူမကသူမအပေါ်သူရူးနေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ သူက 'အနာဂတ်ကိုဘာတွေသိနိုင်မလဲဆိုတာဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ' ဟုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
wow ဒါဒီကောင်လေးက ၂၅ ကီလိုကိုအနိုင်ရပြီး finesse ၏ဘုရင် woowwwwwwwwwwwww နှင့်အတူထွက်ပြေးခဲ့သည် pic.twitter.com/SjmqKDORUD
- အညိုရောင် SKIN GIRL (@sofe_faal) စက်တင်ဘာ 6, 2019
သို့သော်အန်နာ၏ညီမကအခြားနည်းဖြင့်အကြံပေး။ Greg ကို Instagram ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်
သိပ်မကြာခင်မှာပဲအန်နာရဲ့ညီမမန်ဒီပါဝင်ပတ်သက်လာတယ်။ အန်နာ၏ Instagram ပုံပြင်တွင်သူမက 'ဒါဟာအမှန်ပဲ။ သူမမှာဒီမှာ screenshots တွေရှိတယ်။ ငါ့ကိုမစမ်းသပ်နဲ့ '
ထို့နောက်အန်နာကဖုန်းကိုချွတ်လိုက်ပြီး 'ဒါကယောက်ျားတွေပဲ။ ကျွန်တော့်ဖုန်းနဲ့ Mandi ကိုမယုံနိုင်ဘူး။ ' နောက်ခံနောက်ခံပြောနေတာကို Mandi ကြားနိုင်ပါတယ်။ မင်းတို့အားလုံးအဖြေသိချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သတင်းကိုစာသားနဲ့သာငါတို့ချိုးဖောက်နိုင်တယ်။
အန်းနာ၏ညီမသည် Greg ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အဖြေကိုသိချင်သော်လည်းစာသားဖြင့်သာသတင်းကိုဖတ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်သူကတကယ်ကိုစာသားကတဆင့်လုပ်ခဲ့တယ်၊ လိမ်တယ် pic.twitter.com/zmof80JV5k
- ကျောက်စိမ်း (@jvdesvocals) စက်တင်ဘာ 6, 2019
ထိုအခါအန္န၏ညီမနှင့်အန်နာတို့ကသူတို့ကဗီယက်စ်ကို“ ဝမ်းနည်းပါတယ်” ဆိုသောသီချင်းကိုတင်လိုက်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့သီချင်းလေးရဲ့သီချင်းစာသားတွေက 'Boy, bye ။ '
Beyonce နားထောင်နေသည့် Amber နှင့်သူမ၏သူငယ်ချင်းများဝမ်းနည်းပါသည်။ Greg သည်သူ၏ဆုံးရှုံးမှု, fumbled pic.twitter.com/HDEwjXICXf
- ကျောက်စိမ်း (@jvdesvocals) စက်တင်ဘာ 7, 2019
လူတွေက Anna နဲ့သူ့ညီမ Mandi အတွက်သွားကြတယ်
တစ်ယောက်ကမှတ်ချက်ပေးရာတွင်မှတ်ချက်ပြုချက်အမ်ဘာသည်သူမပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဟုခံစားရပြီးသူမသည် ၀ မ်းနည်းစရာ၊ နောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ် 'Anna ရဲ့ညီမကနာမည်ကြီးချင်တယ်' တွစ်တာပိုများတာကညီအစ်မတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် 'သြဇာသက်သက်အားလုံး' နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအများပြည်သူဗီဒီယိုများပို့စ်တင်ဖြစ်ခဲ့သည် 'ကလေးဆန်' ။
ငါအဘယ်ကြောင့်မရကြဘူး @annavakili & သူမ၏အစ်မအမုန်းခံခဲ့ရသည်ပေမယ့်သူမရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့အားလုံးသြဇာအကြောင်းကိုနေတဲ့ပြပွဲနာကျင်မယ့်အခါသူတို့ပယင်းရဲ့မျက်နှာ၌အားလုံးကင်မရာတက်ရရှိပုံကိုမြင်ပြီးနောက်
- ဟေးလီ (@Haysss_) စက်တင်ဘာ 7, 2019
... ငါသာလျှင်ကလေးဖြစ်သည်ဟုအန်နာနှင့်သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်များလုပ်နေသည်ဟုထင်သူမှာငါလား။ ဒါဟာ Amber တစ် neek တူအောင်အောင်ရဲ့။
- kenny♕ (@kmarts_) စက်တင်ဘာ 7, 2019
တွစ်တာတစ်ခုတွင် Anna နှင့်သူမ၏အစ်မ The Cramp Twins တို့က Amber အားငြိမ်းချမ်းစွာကုသခြင်းမပြုခဲ့ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
Loooooooooool ဘာ shite ၏အိတ်?! အန်နာအဆင်ပြေရဲ့လား pic.twitter.com/69gLsXHYrX
- ပရီတီမန်း (@preetimx) စက်တင်ဘာ 8, 2019
ထို့နောက်အန်နာသည်တွစ်တာစာရွက်ကိုယူပြီးလူများကိုသူမနှင့်မန်ဒီအား 'လူမျိုးရေးခွဲခြား' သူအဖြစ်စွပ်စွဲခဲ့သည်။ သူမဤသို့ပြောခဲ့သည် - 'ကျွန်တော်နှင့်မန်ဒီကိုရွံမုန်းနေသည့်ဤအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုသည်လုံလောက်ခဲ့သည်။ KRAMP အမွှာပူးမွေးထားတာ Amber SOOO ကံကောင်းတာကသူမရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့တည်းခိုစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ရင်ရူးတာပဲ။ ငါသည်သင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူသည်နိုင်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါပဲ။
“ ကျွန်တော်ဒီကိုဖြုတ်ချနိုင်တာကအမုန်းတရားနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအီရန်နိုင်ငံသားတွေ၊ ဒီနိုင်ငံမှာတခြားလူမျိုးစုတွေလိုထောက်ခံမှုစနစ်မရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ ဆုတောင်းရန်။ '
Ewww ဘာမှမထူးပါကကံကောင်းပါစေ…အန်နာသည်ထိုသူငယ်ချင်းများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်သူတို့ဘယ်လောက်လုပ်ပေးသည်ကိုအမြဲသတိပေးလိမ့်မည်။ မကောင်းတဲ့ Vibes ။ https://t.co/gtVIxdie8y
- ??????? (@eatwitharli) စက်တင်ဘာ 8, 2019
Amber ကသူမရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ Anna ကိုကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်
Amber ကအန်နာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ကပုံကိုထပ်မံရေးပြီး 'ဒီမိန်းမကငါလိုချင်သမျှအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၊ သူမကငါ့ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံတယ်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုဒီလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအရမ်းပျော်အောင်နေပြီးဒီမှတ်ချက်တွေကိုရပ်ဖို့လိုတယ်။
'ငါပျော်တယ်။ ဘာကြောင့်တခြားလူတွေကဒီလောက်စိတ်ရှုပ်ရတာလဲ။ သူမငါ့ကိုပျော်ရွှင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​မင်းကမင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ဘူး။ '
Amber ကသူမနှင့် Anna တို့၏ဆက်ဆံရေးသည် villa မှထွက်လာရန်တကယ့်အရာဖြစ်သည်ဟု Greg ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောခဲ့သည်
ထို့နောက် Amber ကသူမနှင့် Anna တို့၏ Instagram ပုံပြင်ကိုမျှဝေခဲ့သည်။ GIF တွင် 'ဤအချစ်သည်အမှန်ပင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ' ဖြစ်ပြီးစာတန်းက '' ဗီလာမှထွက်ခွာရန်အစစ်အမှန်ဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းသည်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ မင်းကိုငါအရမ်းချစ်တယ်။'
ဤအတောအတွင်း Greg ရုံယောက်ျားလေးများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားခဲ့သည်
သိသာထင်ရှားတဲ့ဘယ်သူမှ Greg ဘယ်လောက်သိတယ် တကယ် ခံစားနေရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကတဖြည်းဖြည်းချင်းအဆင့်ဆင့်မပေါ်လာဘူး။ Greg နှင့် Amber ပြိုကွဲသွားသောအခါသူသည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုမီဒီယာတွင်ဘာမျှမတင်ခဲ့ပါ။ အဲဒီအစားသူဟာရေကူးဖို့သူ့ကိုယ်သူနဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တချို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတင်ခဲ့တယ်။
ထိုအ Amber စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများပြောခဲ့သည်အတိအကျဖိတ်ခဲ့သည် !!!
Greg ကအားလုံးကိုစာတိုကနေတဆင့်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ အဆိုပါ Loose အမျိုးသမီးများ panel ကိုအပေါ်စကားပြော Amber ကဆိုသည် သူမစိတ်ပျက်ခဲ့ပြီးဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ရန်မမျှော်လင့်ခဲ့ပါ။ သူက“ အလုပ်အကိုင်နဲ့အကွာအဝေးကအမြဲတမ်းအချက်တစ်ချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငါဘာပြောင်းလဲသွားတယ်မသိရပါဘူး။ ငါလုပ်ချင်တာပဲ၊
Amber ဆက်ပြောသည် အဆိုပါစုံတွဲသည်ခွဲထွက်ရေးမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖုန်းပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူမကဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည် - 'အဲဒီမှာအပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့မဆက်ဆံချင်ဘူးဆိုရင်တော့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့မပေါင်းချင်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။
'' သူက 'အဆင်ပြေနုတ်ဆက်ပါတယ်' 'ဟုပြောသည်။ ငါကနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ''
• Love Island ပြိုကွဲသွားသည့်ကျိန်စာ - ဘာကြောင့်လဲစုံတွဲတွေအားလုံးဒီရက်စွဲအတိအကျမှာဘာကြောင့်ကွဲနေကြရတာလဲ
• Love Island 2019: ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးသည်ယခုအချိန်အထိမည်သည်နည်း။